Ogaden News Agency (ONA) – Waqooyiga Kuuriyada oo Gacanta Ku Dhigtay Qorshaha Duulaanka Mareykanka.
Waqooyiga Kuuriyada oo Gacanta Ku Dhigtay Qorshaha Duulaanka Mareykanka.
Posted by ONA Admin	/ October 11, 2017
Budhcada internet-ka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa la sheegayaa inay gacanta ku dhigeen warqado aad u badan oo sir militari ay ku qoran tahay.
Waxaa la sheegayaa in sirta ay ka mid ahayd qorshe lagu dili lahaa hoggaamiyaha dalkaas Kim Jong-Un. Dukumiintiyada la qaaday waxaa ku qornaa xilliga duullaanka iyo qalabka dhameystirkooda oo ay ka wada shaqeeyeen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed.
Sidoo kale waxay la sheegayaa in saraakiil sare oo labadaa dal saaxiibo la ah ay qeyb ka ahaayeen qorshaha. Wasaaradda difaaca Kuuriyada Waqooyi ayaa diiday in ay ka hadasho arrinta la faafiyay. Qorshaha ciidamada gaarka ah ee Kuuriyada Koonfureed ayaa la sheegay in si fudud lagu baxsaday. Waxaa la xaday qorshayaasha muhiimka ah iyo sida qalabka militariga uu noqonayo.
Mr. Rhee oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Kuuriyada Koonfureed, ahna madaxa guddiga difaaca ee Baarlamaanka. Wuxuu sheegay in 235 GB oo sir militari ah, lagala baxay kombuutarada waaxda difaaca. Boqolkiiba 80 lama garanayo cidda la baxday.